thinzar's blog: Fake email & ID Theft
Using Mail Headers :D
But I think Gmail and Hotmail can detect those fake addresses.
3/2/09 4:31 PM
yeah.. it's detectable, by viewing "Show original" in gmail or "Full Message Headers" in yahoo. But usually people don't really bother to trace all those.
3/2/09 9:35 PM
4/2/09 12:34 AM
I got knowledge that i want to know.
4/2/09 2:24 PM
အနာ္တရာယ်ပဲဗျ. ကျွန်တော် တော့ အီးမေးလ် ခေါင်းစဉ်မှာ မသိတဲ့ နာမည် တစ်ခုမြင်တာနဲ့တင် ဖွင့်ကြည့်မနေတော့ဘူး. Delete.ပဲ. =]]
သိပ်ဆိုးလာရင် Spam ထဲပို့လိုက်တယ်.
Social Networking တွေ များလာတာကလည်း ဒါတွေအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်များ ဖြစ်နေလားတော့ မသိဘူးဗျို့.
မယုံကြည်ရတဲ့ email တွေလာရင် detail header/raw header view ကို ဖွင့်ပြီးတော့ to from အထပ်ထပ် ဘယ်တွေကနေ တစ်ဆင့် လာတယ် ဆိုတာ သေချာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Gmail မှာဆိုရင်တော့ email ရဲ့အပေါဖက် show detail ရဲ့ဘေးဘက် က REPLY ရဲ့ down-arrow ကိုနှိပ်ပြီး SHOW ORIGINAL ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပွင့်လာတဲ့ original မှာ ရှိရှိသမျှ ကမ္ဘာပတ် လာတာတွေကို အသေးစိပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ email rout tracer တွေလည်း အဲဒီ info တွေကနေ check လုပ်တာပါပဲ။
အဲဒီမှာပါတဲ့ IP number တွေက အမှန်တီကယ် domain name ဟုတ်မဟုတ် အဲဒီ domain ကို ping လိုက် ပြီး တိုက်ကြည့်ပေါ့။
9/2/09 12:41 PM
အမရေ.. မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ..
စာလေးတွေ တော်တော်များများ ဖတ်သွားပါတယ်..
ရသလေးတွေရော.. နည်းပညာလေးတွေရော.. ဗဟုသုတလေးတွေရော ရေးထားတာ စုံလင်လွန်းလို့ နှစ်သက်မိပါတယ်.. း)
နောက်လည်း အမြဲလာဖတ်ချင်လို့.. အသစ်ဖတ်ရန်ထဲမှာ လင့်ချိတ်လိုက်ပါတယ်နော်..
(ဆီပုံးမတွေ့လို့ ဒီမှာ လေကြောရှည်သွားပါတယ် :P)
10/2/09 6:36 PM
Mr DBA, Ma Kom >> ဖတ်သွားတဲ့ အကြောင်းကို မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ :)
Mhaw Sayar>> အင်း။ အဲလိုတွေ ဖြစ်လာတော့ အမြဲ သံသယစိတ်ကြီးနဲ့ အသက်ရှင်နေရတာပေါ့။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်>> ကိုရင်နော်လား၊ မခင်လေးငယ်လား၊ ကလေးလေးလားတော့မသိဘူး.. စုံလင်တယ်လို့ ချီးကျူးသွားလို့ ဝမ်းသာသွားတယ်။ ဘလော့ဂ်က ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ရေးရင်း ဦးတည်ချက်ပျောက်ပြီး အစုံသုပ်ဖြစ်သွားတာ။ :)